Ungaba kanjani neWindows Live Messenger kuWindows 8.1 | Izindaba zamagajethi
Ungayibuyisa kanjani iWindows Live Messenger kuWindows 8.1?
Ngokwakamuva kakhulu update ehlongozwe yiMicrosoft kuWindows 8.1 izinto eziningi ezindala zisuswe ngokuzenzakalela, yize isithembiso senkampani sizama ukwenza ezinye zazo kungatholwa kuzinhlobo zabo ezilandelayo; I-Windows Live Messenger iyinsizakalo yemiyalezo esheshayo abantu abaningi abafisa ukuba nayo futhi enguqulweni yakamuva futhi ngeshwa, abaningi baphoqeleka ukuthi basebenzise i-Skype esikhundleni.
Abafisayo ube nale nsiza ye-Windows Live Messenger futhi Bazamile ukusesha iwebhu ukuthola izindlela ezihlukile zokufaka kabusha ithuluzi elishiwoyo, bathola isimanga esibuhlungu lapho kusetshenziswa kuphela izinsizakalo ezivela eceleni ezifaka imitapo yolwazi engathandeki namabha wamathuluzi kusiphequluli se-Intanethi. okuthile okufana ncamashi nalokho esake saphawula ngakho ngaphambilini buza; njengamanje sizokunikeza isisombululo esisebenzayo (futhi esisemthethweni) ukuze ukwazi unale nsizakalo yemiyalezo emuva ku-Windows 8.1.
1 Ukusesha iwebhu ye-Windows Live Messenger
2 Ungalanda kanjani inguqulo yamanje ye-Windows Live Messenger?
Ukusesha iwebhu ye-Windows Live Messenger
Ngenxa yesidingo senani elikhulu labantu senze ucwaningo oluncane ngale nsizakalo yemiyalezo esheshayo, siqale sasebenzisa izinjini zokusesha ezahlukahlukene futhi ikakhulukazi, ku-Google.com; khona lapho sibeke njenge sesha igama elingukhiye ku- "Windows Live Messenger", kuqhamuka iziphakamiso eziningi ezingahlangene neze nomthetho kepha kunalokho, ngezicelo namasevisi avela eceleni. Asikukhuthazi ukusingatha noma iyiphi yazo, ngoba zifaka uhlelo lwazo futhi zibuye ziqondise umsebenzisi kumakhasi wewebhu angathandeki.
Futhi, musa ukusesha lezi zinjini ngegama elingukhiye «I-Windows Live Messenger ye-Windows XP », njengoba lokhu kukuqondise ku-URL esemthethweni ye-Microsoft lapho uzolanda khona inguqulo endala yale nsizakalo yemiyalezo esheshayo. Senze okufanayo futhi sithole isikhombimsebenzisi sokuqala nesiphelelwe yisikhathi, ongasithanda esithombeni esizobeka ngezansi kancane.
Vele, kufanele sisho ukuthi le nguqulo isebenza kahle kakhulu, noma kunjalo ngemikhawulo efanele ukuthi izocasula impela uma kukhulunywa ngokuxoxa noxhumana nabo nabangane bethu.
Ungalanda kanjani inguqulo yamanje ye-Windows Live Messenger?
Inhloso yalesi sihloko ukuthi ungakwazi unenguqulo yamanje kakhulu yalolu hlelo lokusebenza lwemiyalezo esheshayo. Sizokunikeza indlela elula ezokuqondisa kamuva ku-URL esemthethweni futhi esemthethweni lapho ungafinyelela khona landa bese ufaka iWindows Live Messenger, konke kusetshenziswa iWindows 8.1.
Kufanelekile ukucabanga okokugcina ngalokho esizokuncoma ngalesi sikhathi, futhi lokho kunjalo yize inqubo empeleni sikuncoma ngeWindows 8.1, ungasebenzisa okufanayo nakwezinye izinhlobo ngaphambi kwayo futhi, kuwo womabili amakhompyutha angama-32-bit no-64-bit.
Qala isistimu yakho yokusebenza yeWindows 8.1 bese ubhekisa phezulu kudeskithophu.
Vula isiphequluli sakho se-inthanethi (akunandaba ukuthi usebenzisa siphi).
Kuhlobo lwe-URL i-Google.com njengenjini yakho yokusesha oyithandayo.
Faka igama elingukhiye: «Windows Essentials»Ngaphandle kwezimpawu zokucaphuna bese ucindezela inkinobho ethi entrar.
Ngokuqinisekile ukuthi uzobona inani elikhulu lemiphumela, kufanele ukhethe owokuqala (ngokuvamile) owokuqala. Lapho uzobona incazelo encane lapho kushiwo khona lokho usuzoya ku-URL esemthethweni yale sevisi; uma kwenzeka ungakayitholi imiphumela efanele sincoma ukuthi uchofoze kusixhumanisi esilandelayo, ezokuqondisa ku-URL esemthethweni yokulanda.
Isithombe esisibeke engxenyeni engenhla yiso ozothola ngaso, kufanele chofoza inkinobho eluhlaza ethi "landa manje"; Ngemuva kokuqeda ukulanda, kufanele usebenzise ifayela layo, elizofaka izinhlelo ezimbalwa futhi phakathi kwazo, iWindows Live Messenger ngaphakathi kwalolu hlelo lokusebenza lweWindows 8.1.
Uma usufake imininingwane (igama lomsebenzisi noma i-imeyili nephasiwedi), uzokwazi ukujabulela zonke izinzuzo ezinikezwa yiWindows Live Messenger; Manje kungahle kube nesikhathi esithile lapho uhlelo lokusebenza lusikisela ukuthi wenze isibuyekezo, Okufanayo okungafanele UKWAMUKELE ngoba nalokhu, uzomane wenze iSkype iqale ukusebenza ngendlela ethile kukhompyutha yakho ngeWindows 8.1.
Sincoma ukuthi uye kusixhumanisi esilandelayo, lapho sifika khona ukuze siphakamise imininingwane ebalulekile yokuthi ungayigcina kanjani le nguqulo ye-Windows Live Messenger iphila ngaphandle kokuyibuyekeza njengoba kuphakanyiswe yi-Microsoft. Kufanele ngqo iya kusixhumanisi esilandelayo ukuze uthole isichibi wayefisa nokuthi kufanele ukwenze ngalesi sikhathi. Ngalesi sichibi esilula uzoba neqhinga elizogcina insizakalo yemiyalezo esheshayo ifakiwe kwikhompyutha yakho isikhathi eside.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Software » Ungayibuyisa kanjani iWindows Live Messenger kuWindows 8.1?
Ngiyabonga mfowethu ngolwazi, futhi uqinisile ngingomunye walabo abazizwa bejwayelene ne-WLM interface, uNkulunkulu akubusise. Nakekela 😉
Isibani se-Paco kusho
Ayikho indlela yokukwenza.
Phendula uPaco bombilla